MOI : fitsaboana faobe ny any Nosy Be | NewsMada
MOI : fitsaboana faobe ny any Nosy Be
Ho tonga any Nosy Be, ny 9 ka hatramin’ny 18 oktobra izao, ireo dokotera 48 mianadahy avy amin’ny Médecin de l’océan Indien (MOI). Hitsabo karazan’aretina maro izy ireo mandritra ny herinandro hijanoany any. Hitety toerana any ambanivohitra ihany koa hanala ny fahasahiranan’ireo olona any ambany ravinahitra.
Hizara roa ny ekipa. Ao ireo hisahana ny fandidiana ka hitoetra eo an-tampon-tanàna mihitsy. Ny sasany kosa, hitety tanàna. Ahitana dokotera manampahaizana marolafy amin’ireo ekipan’ny MOI. Misy ny teratany vahiny ary misy ny dokotera malagasy.
Ankoatra ny fandidiana tsotsotra, hisy koa ny fitsaboana ny nify sy ny ativava. Ankoatra izany ireo mpitsabo ny maso sy ny faritry ny loha. Ny mpitsabo ny aretin’ny fo sy ny lalandra ary ny mpitsabo ny lalankanina sy ny vavony.
Hizara telo kosa ny dian’ireo andiana dokotera ho any Nosy Be. Ankoatra ny fitsaboana, hisy ny fampiofanana ny dokotera any an-toerana. Eo koa ny fanentanana hatao amin’ny ankizy eny amin’ny EPP mikasika ny fahasalaman’ny nify sy ny ativava.
Andiany faha-61 ity hetsika ataon’ny MOI eto Madagasikara ity. Efa andiany faha-74 kosa ny fitsaboana mitety tanàna ataon’ny MOI aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina.
Miara-miasa akaiky amin’ny Ekar Transit ny MOI amin’ny fanamorana ny fahatongavan’ireo fitaovana ampiasaina entina handidiana sy hitsaboana. Eo koa ireo mpiara-miombon’antoka hafa.